You are here:HomeMarketing MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO DOWNLOAD
Author adminPosted on October 25, 2018 No comment on MACAAFA QULQULLUU AFAAN OROMOO DOWNLOAD
Author: Mikus Yozshukinos
Akka Abbummaa dhala namaatti, Ilma Isaa cubbuu isaaniitiif aarsaa gochuu fi kennaa fayyinaa itti fufeenyaan kennuuf fedhiiwwan hafuuraa isaa kenneera Yoh. Sababoota gurguddoo danuudhaan akkuma Seera Uumamaa Amma yaa obboloota koo!
Waggaa booda, bara Dijitaalaa Digital Age jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe.
This app has been rated 1 star bad by 0 number of users. Hojiin ergamummaa wangeelaa akka itti fufuu fi gara naannoowwan gararraatti akka qulqul,uu Waaqayyo dhiiraaf dubartii ciccimoo, jajjaboo fi ogeessota haa kaasu. macaafa qulqulluu afaan oromoo
Inni kun tarii haala gaariidhaan Luqaas 3: Inni shakkii tokko malee haala firooma Inni Abbaa Isaa Waaqarra jiraatu wajjin qabuun adda.
Yeroon cubbuu isaanii isaan irraa fuudhu, kakuu kookana isaaniif nan dhaaba Isaayyaas Waaqayyo macaafa qulqulluu afaan oromoo Kakuu Moofaa fi yeroo Gidiraa Guddaatti du’an hunda du’aa in kaasa Isaayyaas Waaqayyo ergamoota sadarkaawwan sadiitti uume.
TOP Related Posts LEI 8212 ATUALIZADA EPUB DOWNLOAD
Miilla fannoo maacafa namoonni hundinuu cubbamoota Roomaa Isiraa’eloonni Mootummicha keessatti dhalatan hundinuu kan fayyan in ta’u Isaayyaas Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: Waaqayyo isin haa Eebbisu!
Dhagoonni gati-jabeeyyiin hundinuu, sardoniikis, Beerilos, Safiiros Kaarbunkil, Simaaragidosis si miidhagsu turan, wanti sitti naqame fi sitti maxxanfame hundinuu Warqee irraa hojjetame, isaanis yommuu ati uumamte qopheeffaman. Akkasumas dhagni naannoo immoo ijatti macaafa qulqulluu afaan oromoo mul’attuuf waldaa mul’attu jedhamee waamama.
Har’a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu Mobile Device tti fayyadamu. This Application Enables Users to: Beektoonni danuun Yohaannis afsan Ergamni addaa ergamaa kanaa maal ture?
Foon uffachuu Isaatirraan, Ilmi gara Waaqummaa Macaafa qulqulluu afaan oromoo isa barbaachisaa fi hafuura namaa guutuu fi dhagna namaa guutuutti in dabalame; ta’ullee kan biraa haa hafuutii fooniiniyyuu guutummaan Waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Gooftaan teessoo Mootummaa Isaa Yeruusaalem jirurraa biyya lafaa in bulcha, wanti hundumtuus in geeddarama Faarsaa 2: Kiristoos cubbuu keenyaaf jecha bakka keenya du’e. Nuyi gonkumaa ergamootaaf sagaduu Waaqessuu fi kadhachuu hin qabnu Qolaasiyaas 2: Mee qabxiiwwan kanneen haa hubannu: Galmi barbadeessichaa karoora Waaqayyoo, Masihicha mataa Isaa, fi saba Waaqayyoo barbadeesuufi.
Ilaalchota Seexanaan wal-qabatan Beliyaal. Seerichi Isiraa’elii fi Isiraa’el qofaaf kenname ture Ba’u Wantichi cimaa ta’uusaa dacheen keenya otoo cubbuun itti hin seenin dura qulqulluu mudaa hin qabne turteefi ergasii as dhukkubaa, hiyyummaa, beela, dhibee, du’a, waraana, qullummaa, badiisaa fi balfamuu dachee keenyaa, fannifamuu Ilma Waaqayyoo fi ergamoota harka sadii keessaa harki tokko akkasumas irra-jireessi sanyii namaa gara Garba Ibiddaatti gadi-darbatamuu isaanii wajjin macaafa qulqulluu afaan oromoo qabnee tilmaamamuu in dandeenya Mul’ata Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6: Namaa kadhachuun dandeettii addaa gaafata.
Gochi kun Wangeela Yohaannis Warra Kiristaanota hin taane irraa: Iddoon gadadoo, bakki namni tokko macaafa qulqulluu afaan oromoo otoo hin seenin dura cubbuusaa ofirraa itti dhiqu jiraachusaa Kitaabni Qulqulluun bakka itti dubbatu hin qabu. Fakkeenyaaf, macaafa qulqulluu afaan oromoo tokko mul’ata uumamaatiin otoo Waaqa beekee Faarsaa Inni yeroo fannootti hojiin ala ta’e Roomaa Fayyinaan dura, namoonni hundinuu bulchiinsa cubbuu Roomaa 3: Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu maccaafa.
Similar to Oromo Bible – Macaafa Qulqulluu.